editor – Page2– My Doctor
By editor|2020-02-03T03:28:47+00:00February 2nd, 2020|Categories: All Articles, ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ပင်မဆဲလ်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ Stem Cells ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် မူလအရင်းအမြစ်ဆဲလ်ဆိုပြီး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာသင်ရဖူးပါတယ်။ ဆဲလ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာကို တစ်ရှုးဟုခေါ်ကြောင်း တစ်ရှုးများဖွဲ့စည်းထားလျှင် Organ အစိတ်အပိုင်းဟုခေါ်ပြီး Organ များဖွဲ့စည်းထားလျှင် System အဖွဲ့အစည်းဟုခေါ်ကြောင်းကို သင်ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါဆိုလျှင် ဆဲလ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်မဆဲလ်ဟုဆိုရာတွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ မူလပထမဆဲလ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပင်မဆဲလ်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို စတင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနှင့် မူလဆဲလ်သည် မွေးစကလေးအပေါ် ဘယ်လိုအသုံးဝင်ကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြပါရစေ။ မူလဆဲလ် (Stem Cells) ကိုယခုနောက်ပိုင်း သိမ်းဆည်းလာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသိမ်းကြလဲ၊ ဘာလို့သိမ်းကြတာလဲဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ အနည်းငယ်သာရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုသိမ်းကြလဲဆိုရင် ကျတော်တို့ သွေးဘဏ်တွေ သိမ်းဆည်းသလိုပင်
ရေများများသောက်တိုင်းကောင်းသလား? လူခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့70%ကရေဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဓာတ်ကလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေး ကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ရေကိုများမျာသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။တစ်နေ့ကိုလူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေ ၂ လီတာ (ရှစ်အောင်စ )သောက်သုံးသင့်တယ်လို့စာတမ်းတွေအရပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်အရာမဆိုတန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သောရေပမာဏထက်ပိုပြီးသောက်နေမိပြီဆိုရင်အောက်မှာပြောပြပေး ထားတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်--------------- ကဲ-----ဒါဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်-------------- (၁)ဆီးသွားတဲ့အခါ ဆီးအရောင်ဖြူဖွေးလာခြင်း။ (၂)ညအိပ်ချိန်တွင်ဆီးခဏခဏသွားခြင်း။ (၃)ပျို့အန်ချင်လာခြင်း။ (၄)နားများအူလာခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ (၅)လက်များ၊ခြေများဖောလာခြင်း။ (၆)ခြေထောက်အလွယ်တကူကြွက်တက်ခြင်း။ (၇)ခြေကုန်လက်ပန်းကျ၍မောပန်းသလိုခံစားရခြင်း အစရှိတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေခံစားရနိုင်လာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပမာဏထက်ကိုယ်က ရေပိုသောက်နေမိပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပါ။အနာရောဂါကင်း ဝေးပြီးအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္တိုင္းေကာင္းသလား? လူခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈရဲ႕70%ကေရဓာတ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ေရဓာတ္ကလူခႏၶာကိုယ္အတြက္အေရး ႀကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေန႔စဥ္ေရကိုမ်ားမ်ာေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။တစ္ေန႔ကိုလူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရ ၂ လီတာ (ရွစ္ေအာင္စ )ေသာက္သုံးသင့္တယ္လို႔စာတမ္းေတြအရေျပာပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ဘယ္အရာမဆိုတန္ေဆးလြန္ေဘး ဆိုတာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာေရပမာဏထက္ပိုၿပီးေသာက္ေနမိၿပီဆိုရင္ေအာက္မွာေျပာျပေပး ထားတဲ့အခ်က္ေလးေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္ေနာ္--------------- ကဲ-----ဒါဆိုရင္ဒီအခ်က္ေလးေတြကိုဖတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္-------------- (၁)ဆီးသြားတဲ့အခါ ဆီးအေရာင္ျဖဴေဖြးလာျခင္း။ (၂)ညအိပ္ခ်ိန္တြင္ဆီးခဏခဏသြားျခင္း။ (၃)ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္လာျခင္း။ (၄)နားမ်ားအူလာျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း။ (၅)လက္မ်ား၊ေျခမ်ားေဖာလာျခင္း။ (၆)ေျခေထာက္အလြယ္တကူႂကြက္တက္ျခင္း။ (၇)ေျခကုန္လက္ပန္းက်၍ေမာပန္းသလိုခံစားရျခင္း
By editor|2020-01-27T16:00:15+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
*စားစရာလေးတွေနဲ့မျက်နှာပေါင်းတင်ကြမယ် အခုခေတ်မှာဆိုရင် အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အတော်များများကမျက်နှာအသားရေလှပဖို့အတွက် ပေါင်း တင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ကတော့ Spa တွေသွားပြီတင်ကြသလိုတစ်ချို့ကအိမ်မှာ ပဲကိုယ့်ကို maskလေးတွေလုပ်ကြပါတယ်။အိမ်မှာပဲmask လေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပေါင်းတင်ကြမဲ့သူတွေအတွက် စားစရာ လေးတွေနဲ့ မုန့်လည်းစားရင်းပေါင်းလည်းတင်ရင်းလုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)Cocoa Powder ဒီနည်းလေးကတော့ပေါင်းတင်ပြီးသွားရင်မျက်နှာအသားအရေလေးက ကလေးလေးလိုနူညံ့သွားမှာပါနော်။ဒီ Mask လေး ဘယ်လုပ်ကြမလဲဆိုရင်-----Cocoa Powder ဇွန်းကြီး(၁)ဇွန်း,ဂျုံမှုန့်ဇွန်းသေး(၁)ဇွန်း,ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၃)ဇွန်း, ကြက်ဥအကာ,သံလွင်ဆီတစ်စက်,နွားနို့ဇွန်ကြီး(၁)ဇွန်--ပါပဲ သတိထားရမှာကတော့ ကိုယ်မျက်နှာကဝက်ခြံထွက်တတ် တဲ့အသားအရည်ဆိုရင်နွားနို့အစားဒိန်ချဉ်ကိုသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ (၂)Lemon ဒီနည်းလေးကတော့ ပါဝင်ပသစ္စည်းလည်းမများတဲ့အတွက်ကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပါတယ်နော်။သံပုရာရည်ထဲ ကိုသံလွင်ဆီအနည်းငယ်၊ပျားရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးသေချာစွာမွှေပါ။ပြီးရင်မျက်နှာမှာ(10)mins လောက်လိမ်းထားပေးပြီး ရင်ရေနွးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲမျက်နှာလေးကကြည့်ပြီးလှပသွားမှာနော်။ (၃)Mayonnaise Mayonnaise ကပေါင်မုန့်လေးနဲ့စား၊Sushi လေးနဲ့စားလို့အရသာရှိရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာ လည်းအရမ်းကိုအကျိုးရှိလှပါတယ်။Mayonnaise ကိုမျက်နှာမှာနေရာအနှံလိမ်းထားပြီး mins(20)လောက်ကြာတဲ့အခါမှာရေ ဆေးချပေးပါတယ်။ပေါင်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မျက်နှာလေးကသန့်စင်ပြီးနူညံ့တဲ့ခံစားမှုလေးဖြစ်သွားမှာပါ။ (၄)Egg ဒီနည်းလေးဟာဆိုရင် ကြက်ဥအနှစ်နဲ့အကာနဲ့ခွဲလိုုက်ပါ။အကာကိုဘဲယူပြီးပျားရည်အနည်းငယ်၊သံပုရာရည်
By editor|2020-01-27T15:29:22+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
By editor|2020-01-23T08:44:23+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
By editor|2020-01-23T08:29:21+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
By editor|2020-01-23T08:13:31+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
By editor|2020-03-04T03:59:21+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|